အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို အမိုက်စားပုံစံလေးတွေနဲ့ စွဲဆောင်လိုက်ပြန်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ စပါယ်ရှယ်ပုံရိပ်လေးတွေ – Shwe Ba
Homepage / Cele News / အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို အမိုက်စားပုံစံလေးတွေနဲ့ စွဲဆောင်လိုက်ပြန်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ စပါယ်ရှယ်ပုံရိပ်လေးတွေ
အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို အမိုက်စားပုံစံလေးတွေနဲ့ စွဲဆောင်လိုက်ပြန်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ရဲ့ စပါယ်ရှယ်ပုံရိပ်လေးတွေ
ရွှေအိမ်စည် က တော့ ပြေပြစ် လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားနဲ့ အတူ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အလှတရား တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ အလှမယ် တစ်ဦး အဖြစ် ပရိသတ် တွေရဲ့ အားပေးမှု ကို စတင် ရရှိခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည် က နိုင်ငံတကာ အလှမယ် ပြိုင်ပွဲ တွေ အထိ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ အခု ဆိုရင် တော့ အိမ်စည် က သရုပ်ဆောင် အဖြစ် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး တွေ ရိုက်ကူး နေတာ ဖြစ် ပါ တယ် … .
သရုပ်ဆောင်ပိုင်း မှာပါ ထူးချွန်တဲ့ အိမ်စည်က နောက်ပိုင်း မှာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ကြီးတွေ နဲ့ ဇာတ်လမ်း တွဲတွေ ဆက် တိုက် ရိုက်ကူး လာရတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ရွှေအိမ်စည် က တော့ အသက် ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အောင်မြင်မှု တွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ပရိသတ် အားပေးမှု ကိုလည်း အခိုင် အမာ ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ လတ် တလော မှာတော့ အသား ကပ် ဖက်ရှင်လေးကို ဝတ်ဆင် ကာ သူမရဲ့ အလှတရားတွေ ပေါ်လွင် နေတဲ့ အမိုက် စား ပုံရိပ်လေး တွေကို ဖော်ပြ ထားတာ တွေ့ ရပါတယ် ။
ပုံလေး ထဲမှာ အိမ်စည် တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ အရမ်း ချစ်စရာ ကောင်းနေ တာကြောင့် ပရိသတ် တွေ အချစ်ပို စေမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ချစ် ပရိသတ် တွေ အတွက် မင်းသမီး ချောလေး ရွှေအိမ်စည် ရဲ့ ပုံလေး တွေ ကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ် နော် ။ ရှေ့ဆက် ပြီးလည်း အိမ်စည် ရဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု လေးတွေ ကို ဆက်လက် အားပေး လိုက်ပါအုံးနော် … .
ေရႊအိမ္စည္ က ေတာ့ ေျပျပစ္ လွပတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားနဲ႔ အတူ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အလွတရား ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အလွမယ္ တစ္ဦး အျဖစ္ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အားေပးမႈ ကို စတင္ ရရွိခဲ့တဲ့ ေရႊအိမ္စည္ က နိုင္ငံတကာ အလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲ ေတြ အထိ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အခု ဆိုရင္ ေတာ့ အိမ္စည္ က သ႐ုပ္ေဆာင္ အျဖစ္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီး ေတြ ရိုက္ကူး ေနတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္း မွာပါ ထူးခၽြန္တဲ့ အိမ္စည္က ေနာက္ပိုင္း မွာ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား ႀကီးေတြ နဲ႔ ဇာတ္လမ္း တြဲေတြ ဆက္ တိုက္ ရိုက္ကူး လာရတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ေရႊအိမ္စည္ က ေတာ့ အသက္ ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ပရိသတ္ အားေပးမႈ ကိုလည္း အခိုင္ အမာ ရရွိထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။လတ္တေလာ မွာေတာ့ အသား ကပ္ ဖက္ရွင္ေလးကို ဝတ္ဆင္ ကာ သူမရဲ့ အလွတရားေတြ ေပၚလြင္ ေနတဲ့ အမိုက္ စား ပုံရိပ္ေလး ေတြကို ေဖာ္ၿပ ထားတာ ေတြ႕ ရပါတယ္ ။
ပုံေလး ထဲမွာ အိမ္စည္ တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ အရမ္း ခ်စ္စရာ ေကာင္းေန တာေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြ အခ်စ္ပို ေစမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ခ်စ္ ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ေရႊအိမ္စည္ ရဲ့ ပုံေလး ေတြ ကို ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ပါတယ္ ေနာ္ ။ ေရွ႕ဆက္ ၿပီးလည္း အိမ္စည္ ရဲ့ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေလးေတြ ကို ဆက္လက္ အားေပး လိုက္ပါအုံးေနာ္ … .
Next post အကိတ်မလေး မေပန်းချီကတော့ ပိုက်ဆံလဲမရှိ အပျင်းလည်းကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ဒဲ့ပြောချလိုက်ပြီ (ရုပ်သံ)